Batocera: iyo inoshanda sisitimu yekudzoreredza | Mahara emahara
Batocera: iyo inoshanda sisitimu yekudzoreredza
Kune mafeni mazhinji uye mazhinji ekudzokeresa, ndiko kuti, yeavo vese retro kana echinyakare mavhidhiyo emitambo mazita asingambofi akabuda muchitaira. Naizvozvo, vazhinji uye vanogadzira varikugadzira mapurojekiti kusangana nezvinodiwa nevashandisi vanofarira. Muenzaniso wezvirongwa izvi chaizvo batocera, iyo yekushandisa iyo yandinoenda kuzokupa kwauri mune ino chinyorwa.
Mune zvimwe zvinyorwa takatotaura pamusoro pezvinhu pamusoro penyaya iyi inonakidza kwazvo, sezvazviri yakanakisisa emulators izvo zviripo zveiyo Raspberry Pi bhodhi kugadzira yako yakachipa Arcade muchina, kana zvimwe zvimwe zvishandiso uye zvikamu zvaunogona kushandisa sevatongi (mafaro) kana maitirwo erudzi urwu rwe Arcade michina chaiwo arcades e80s uye 90s. Kana iwe uchifarira chidzidzo ichi, ndinokukoka kuti uenderere mberi nekuverenga ichi uye nezvimwe izvo zvinyorwa kuti udzidze zvimwe ...
1 Chii chinonzi Batocera?
2 Tora Batocera.linux
4 Wedzera mitambo yemavhidhiyo kuBatocera
Chii chinonzi Batocera?
Zvakanaka, sezvandambotaura, inzira yekushandisa. Iyo purojekiti batocera yaita OS yakazara ichishandisa Linux sehwaro, semamwe akawanda akafanana mapurojekiti. Naizvozvo, iyo yemahara uye yakavhurwa sosi purojekiti.
Ichi chirongwa ndeche nyanzvi mukudzorera, uye inowanikwa zvachose mahara kuPC yako kana yako Raspberry Pi bhodhi, pamwe nemamwe mabhodhi eSBC akadai seOdroid, nezvimwe. Panyaya yekuve nePC, LiveUSB inogona kushandiswa kuitira kuti usazoshandura zvikamu kana yazvino mashandiro. Ndokunge, iwe unongoshandisa iyo pendrive neBatocera kuitangisa uye hapana chinoda kuiswa.
Kunyange iwe unogona zvakare kuiisa pamakomputa ekare ine 32-bit x86 machipisi, pamwe neIntel NUC, muApple Mac, uye kunyangwe mune Android bhokisi senge Amlogic.
Para tora Batocera, unogona kuitora mahara kubva pawebsite yeprojekti. Uye zvakare, kubva ipapo iwe uchavewo nekwako nharaunda yakakura inoda kubatsira, pamwe nemagwaro ekukubatsira iwe kana iwe uine mibvunzo.
Kana iwe uchida kuishandisa iyo SBC, senge iyo Raspberry PiIwe unongofanirwa kurodha pasi rakamanikidzwa neiyo inoshanda sisitimu yemufananidzo, unzip, uye wozoshandisa iyo yakati mufananidzo kuti uichengete kune iyo SD kadhi iyo iwe yauchazobva wabhuya kubva kune yako mamaboard. Kuti uwane rumwe ruzivo, unogona ona chinyorwa cheNOBOBS mune iyo gadza NOOBS chikamu uye uteedzere iwo mamwe matanho eBatocera.
Imwe sarudzo kana iwe uchida kugadzira iyo Batocera-yakagadzirira SD kadhi rePi yako, ndeye kushandisa yakakurumbira Etcher chirongwa izvo zvatakatotaura nezvazvo muHwLibre. Unogona kuona ruzivo rwese, uye nhanho dzekutevera mukati chinyorwa chatinoburitsa...
Pane kudaro, kana iwe uchida gadzira USB yePC, ipapo iwe unofanirwa kutevedzera nhanho dzakafanana dzaunofanirwa kuteedzera kugadzira bootable pendrive neimwe yekushandisa system. Unogona kuzviita nenhamba huru yezvishandiso nekutevera aya matanho akareruka:
Dhawunirodha pasuru yeBatocera.
Unzip faira rakadzingwa kuti ubvise iyo IMG mufananidzo kubva kuOS.
Zvino gadza uye unomhanya chero eemaapps akasarudzwa maitiro. Unogona kusarudza imwe yezvakawanda zviripo, senge Aetbootin (Windows, Linux, macOS), Rufus (Windows, Linux), Yumi (Windows, Linux), Etcher (Windows, macOS, Linux), nezvimwe.
Shandisa iri Anwendung kusarudza pendrive yakaiswa muPC maunoda kuisa iyo system uye iyo Batocera mufananidzo yekuisa.
Tevera chirongwa wizard uye wapedza.
Iye zvino unogona kutangazve komputa, isa iyo pendrive.
Pinda BIOS / UEFI kuti uchinje boot kutanga uye isa USB sepakutanga. Buda uye chengetedza shanduko.
Ikozvino inofanira kubhowa neBatocera pane yako yakajairwa OS.
Unogona kuishandisa uye ita chero chaunoda nacho. Uye kuti udzokere kune yako yakajairika sisitimu yekushandisa iwe unongofanirwa kutanga uye kubvisa iyo USB kuitira kuti itangezve neako system ...
Kamwe painotanga, kubva kuBatocera menyu (tinya iyo Space kiyi) iwe unogona kuisa iyo yekumisikidza ku chinja mutauro kuSpanish uye saka zvichawedzera kunzwisisa.
Kana iwe uchinetseka nezve kuenderana kwemitambo yeRetro inogamuchirwa naBatocera, chokwadi ndechekuti ine maraibhurari akakwana kuti iwe ugone kutamba nhamba hombe ye chikuva vhidhiyo mitambo izvo zvaive ngano panguva iyoyo munhoroondo. Naizvozvo, unogona kutamba nhamba hombe yemazita.
Kuti uwane rumwe ruzivo, iwe unogona kuona izvi rondedzero yemamwe emapuratifomu akatsigirwa:
Nintendo 3DS, Game Boy, GameCube, Game Boy Advance, Game Mukomana Ruvara, 64, DS, Varaidzo Sisitimu, SNES, Wii
Neo-Geo, CD, Pocket, Pocket Ruvara
Kuti uwane rumwe ruzivo - Batocera kuenderana
Wedzera mitambo yemavhidhiyo kuBatocera
Kana iwe uchida wedzera mitambo yemavhidhiyo kuBatocera, iwe unogona kutevedzera aya matanho akareruka ekuwedzera iwo mazita aunoda kutamba, kana achienderana nemapuratifomu ataurwa pamusoro.
Yokutanga ndeye tsvaga webhusaiti kubva kwaunotora mitambo Unodei. Pane zvakawanda mawebhusaiti ayo anopa maROM yekare, kunyange mukati Internet Archive unogona kuwana zvimwe zvekare. Paunenge uchinge uine iyo ROM, nhanho dzekuiwedzera kune yako Batocera zvakare zvakareruka, asi iwe unogona kuzviita nenzira dzinoverengeka.
Imwe yei nyore Izvo zvinotevera:
Isu tinoremedza Batocera pakombuta yedu.
Dhinda iyo Space kiyi uye enda kuSystem Config menyu
Zvino enda kuChengetedzo Chishandiso.
Sarudza iro rakaoma dhiraivhu remugadziri wako komputa ipapo, kana iwe uri kuzviita kubva paPC. Zvikasadaro, iwe unofanirwa kushandisa dzimwe sarudzo kupfuudza maROM kuburikidza nemambure akagovaniswa diski, nezvimwe.
Iyo yakaoma dhiraivha ndiko kwaungadai waifanira kutora maROM emavhidhiyo mitambo yaunoda.
Zvino rova ​​Kudzoka, uyezve reboot iyo system.
Panofanira kunge paine folda inonzi "recalbox" pane yako hard drive. Ndipo paunogona kukwenya, kuteedzera BIOS, maROM, nezvimwe. Iwe unongofanirwa kuteedzera mafaera eisina kuvharwa maROM mune iyo dhairekitori kubva pane yako yaunogara uchishandisa system
Paunenge uchinge uinavo, tangazve iyo system uye bhuti kubva kuUSB neBatocera. Uye iwe unofanirwa kukwanisa kutamba mutambo wakatakurwa pari zvino.
Sezvawaona, zvakafanana nekuti zvaizoitwa sei yeRecalbox, uye chikonzero ndechekuti Batocera yakavakirwa pairi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Raspberry Pi » Batocera: iyo inoshanda sisitimu yekudzoreredza
RecalBox: iyo yekupedzisira retro yemitambo chikuva
Nest thermostat: Chishandiso chakangwara cheGoogle pamba